Soosaarayaasha yaanyo qasacadaysan oo yaanyo ah iyo warshad - Shiinaha Soosaarayaasha yaanyo yaanyo qasacadaysan
Hebei Yaanyada Warshadaha Co., Ltd.
Tamaandhada qasacadaysan ee Tamaandhada
Sachet Tamaandho dhaji
Drum Tamaandho Dhaxan
Yaanyo qasacadaysan 210g
Yaanyo qasacadaysan 70g (2)
Yaanyo qasacadaysan 70g
Jinka yaanyo waa mid ka mid ah cuntada maalinlaha ah. Waxay ka dhigi kartaa cuntooyinka kuwo macaan badan oo caafimaad leh dadka. Waxaan sameyn karnaa tayo kala duwan sida codsiyada macaamiisha iyo tayada tayada suuqa, koolladu waa yaanyo caadi ah midab casaan dabiici ah, 100% aan lahayn wax lagu daro, qaro weyn oo aan biyo lahayn. Waxaan sameyn karnaa GINO tayo yaanyo tayo leh. "Tayada Koowaad" had iyo jeer waa mabda'ayaga si loo farsameeyo yaanyada. Our warshad daboolayaa aag of 58,740 mitir murabac, wax soo saarka sanadlaha ah ee hadda jira waa 65,000 tan, waxaan ...
Yaanyo qasacadaysan 400g
Hebei Yaanyada Warshadaha Co., Ltd. waxaa laga aasaasay ilaa 2007 magaalada Hebei, Shiinaha, wadarta maalgashiga waa US $ 3.75 milyan, kuwaas oo ku takhasusay ka baaraandegidda dhammaan noocyada Canugga Tamaandhada Qasacadaysan iyo Sachet Tamaandhada Paste.